बलिउड / हलिउड Archives - Page 35 of 42 - Purbeli News
चर्चित अभिनेताहरु जसले श्रीमती हुँदाहुँदै परस्त्रीसँग सम्बन्ध बनाए
फिल्मी उद्योगमा यस्ता धेरै उदाहण छन् जो विवाहित हुँदा हुँदै दोस्रो, तेस्रो सम्बन्ध बनाउँने अभिनेता–अभिनेत्रीहरु । यस्तै केही चर्चित अभिनेताका बारेमा जान्नुहोस्, जसको आफ्नी सुन्दर श्रीमती हुँदाहुँदै पनि अर्को अभिनेत्रीसँग अफेयर चलेको सुनियो । अक्षय कुमार र ट्वीकल खन्ना – अक्षय कुमार र रविना टंडनको सम्बन्ध एक समय निकै घनिष्ट थियो । दुई जनाले ...
नेपाली चेली तेरीयाले पाइन यि महंगा पुरस्कार : ति के के हुन ?
काठमाण्डाै । नेपाली चेली तेरिया मगरले भारतको टेलिभिनज ‘झलक दिखला जा’ को उपाधि जितेकी छिन् । तेरियाले यस अघि जी टेलिभिजनबाट प्रशारण हुने ‘डान्स इन्डिया डान्स’ को उपाधि जितेकी थिइन । तेरियाले उपाधि उचालेको शो भने शनिबार साँझ कलर्स टेलिभिजनले प्रशारण गर्नेछ । फाइनलमा तेरियाले डीआईडी सिजन १ का विजेता सलमान युसुफ खान र वल्र्ड हिपहप च्याम्पियन सानतु...
एजेन्सी । बलिउड अभिनेता सलमान खानलाई १८ बर्ष पुरानो मुद्दामा सफाई मिलेको छ । जोधपुरस्थित सेन्सेस अदालतमा हरिण शिकारसँग सम्बन्धित मुद्दा चलिरहेको थियो । सलमान खान आफ्नी बहिनी अलवीराको साथ अदालत पुगेको केही मिनेट मै फैसला सुनाइएको थियो । बुधबार बिहान सलमान खानलाई मुद्दाबाट सफाई मिलेको फैसला सुनाइएको हो ।फैसला सुन्ने बित्तिकै सलमान खान अदालतबाट बाहि...
एजेन्सी । हालै एक किताब सार्वजनिक समारोहमा बोल्ने क्रममा बलिउडका महानायक अमिताभ बच्चनले धेरै रमाइला प्रसंग कोट्याए । एक पटक निर्माता तथा निर्देशक मनमोहन देसाईले ‘अमर अकबर एन्थनी’ फिल्मको प्रस्ताव लिएर अमिताभ कहाँ गए, तब उनले देसाईलाई भने ‘तिमी पागल भयौ ?’ किनकि त्यस समयमा ‘छोटी बहु’, ‘बढी बहन’ जस्ता फिल्म चल्थे, यस्तो फिल्म कसले हेर्छ भने ?’ भनेक...
सलमान खानको १८ बर्षे पुरानाे मुद्धा बल्झियाे : मुद्दाको फैसला आजै : ३ देखि ७ वर्षसम्म जेल हुन सक्ने
एजेन्सी । बलिउड सुपर स्टार सलमान खानको हरिण शिकारसँग जोडिएको १८ वर्ष पुरानो मुद्दाको बुधबार फैसला हुने बताइएको छ । यदि यो मुद्दामा सलमान दोषी ठहरिए ७ वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने बताइएको छ । सन १९९८ मा भएको यो शिकार सम्बन्धि मुद्दामा सलमानको विरुद्ध चार मुद्दा चलिरहेको छ । यी मध्ये दुईमा लेहाइकोर्टबाट सफाई पाइसकेका छन । अर्को एक मुद्दाको सुनुवाई भ...
शाहरूखले जंगिदै भने – नारीकाे इज्जत नगरे छाेराकाे गर्दन छिनाइदिन्छु !
एजेन्सी। नयाँ वर्षमा भारतको बेङ्लुरुमा महिलाहरुसंग गरिएको दुर्व्यवहारले पुरै भारतको ध्यान खिचेको छ। यहि मुद्धामा शाहरुख खानले एक पत्रिकाको लागि हालै अन्तर्वाता दिँदै महिलाको इज्जत नगरे छोराको गर्दन काट्ने बताएका छन्। उनले भने, ‘म आफ्नो दुवै छोरा आर्यन र अबरामलाई सिकाउने गर्छु कि कुनै केटीलाई हर्ट नगर्नु। यदि तिमीहरुले यस्तो गल्ती गर्यौ भने गर्...
झन्डै अढाई दशकअघि पश्चिम अर्घाखाँचीको खाँचिकोट र कपिलवस्तुस्थित पुर्खयौली घर गाउँका स्थानीय भाकामा नाचेर नथाक्ने अमृता आचार्य यतिबेला पश्चिमी दुनियाँमा आफ्नो शानदार अभिनयको चमत्कार देखाउँदै छिन्। युरोपमा कहलाएका नेपाली मुलका चिकित्सक प्रो. डा. गणेश आचार्य र युक्रेनी मुलकी आर्किटेक्ट आमा लारिसा आचार्यको कोखबाट २९ वर्षअघि जन्मिएकी अमृताको बाल्...
एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडा आफ्नो अमेरिकी टेलिभिजन शो ‘क्वाटिको–२’को सुटिङका क्रममा दुर्घटनामा परेकी छिन् । एफबीआई ड्रामा सीरीज ‘क्वाटिको सीजन–२’को एउटा एक्सन दृश्य दिने सुटिङका क्रममा चिप्लिएर लडेकी थिइन् । उनको टाउँकोमा चोट लागेको बताइएको छ । खबरअनुसार, प्रियंकालाई तत्कालै अस्पताल पुर्याइएको छ, उनलाई उपचारका लागि केही दिनको छुट्ट...
एजेन्सी । कहिलेकाही अाफैले लगाएकाे पहिरनले धाेका दिदा कस्ताे महसुस हुन्छ अाफै बिचार गर्न सकिन्छ । मान्छेकाे भिडमा अाब्रुक राख्ने तिनै कपडाले बलीउडकी हस्ती दिपिका पादुकाेणलार्इ पनि दिनुसम्मकाे धाेका दिएकाे छ । हालैमात्र हलिउड नायक भेन डिजेलसंग XXX:रिटर्न अफ जेण्डर केज’मा अभिनय गरिसकेकी बलिउड नायिका दिपीका साेही फिल्मकाे प्रिमियर साे हुदै गर्दा ...